သင်၏ဆိုက်ကို CSS Sprites ဖြင့်မြန်ဆန်စေခြင်း Martech Zone
သင်၏ဆိုက်ကို CSS Sprites ဖြင့်မြန်ဆန်စေခြင်း
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 9, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
ငါဒီ site မှာ page speed အကြောင်းနည်းနည်းလောက်ရေးထားတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ site တွေလုပ်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနဲ့တိုးတက်မှုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အင်အားကြီးသောဆာဗာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်တူသောကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းအပြင် အကြောင်းအရာပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်များပျှမ်းမျှ web developer များသုံးနိုင်သည့်အခြားပရိုဂရမ်းမင်းနည်းစနစ်များစွာရှိသည်။
မူရင်း Cascading စတိုင်ပုံစံ၏စံသည်ယခု ၁၅ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာကိုဒီဇိုင်းနှင့်ကွဲပြားစေသောကြောင့် CSS ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဘလော့ဂ်နှင့်အခြားမည်သည့်အရာများကိုမဆိုကြည့်ပါ၊ ပုံစံကွဲပြားမှုအများစုသည်ပူးတွဲထားသောစတိုင်ဇယားကွက်တွင်သာရှိသည်။ Stylesheets များသည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သင်၏ browser အတွင်းရှိ cache ထဲတွင်သိမ်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်လူများသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဆက်လက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင်သူတို့သည်စာမျက်နှာစာမျက်နှာတစ်ခုစီတိုင်းကိုစတိုင်လ်စာရွက်တစ်ခုစီကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
၎င်းကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုနှေးကွေးစေသည်။ က နှေးကွေးသော site သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်စကားဝိုင်းများအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည် သင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုစေသည်။ Web developer များအသုံးပြုသောမဟာဗျူဟာသည်ပုံများအားလုံးကိုဖိုင်တစ်ခုတည်းထဲသို့ထည့်သည် ခွေ။ သင်၏ဖိုင်ပုံရိပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်တောင်းခံမည့်အစား၊ Sprite ပုံတစ်ခုတည်းအတွက်သာတောင်းဆိုရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျအကွောငျးကိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ CSS Sprites သည် CSS-Tricks တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည် or Smashing Magazine ၏ CSS Sprite ပို့စ် သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုသင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်ထို site အတွင်းသို့ထည့်သွင်းရန်သင့်အားအကြံပေးရန်သာဖြစ်သည်။ CSS Tricks ၏နမူနာသည်တောင်းဆိုမှု ၁၀ ​​ခုပါသောပုံ ၁၀ ခုနှင့် ၂၀.၅ ကီလိုဂရမ်အထိထည့်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်း Sprite ၌စုဝေးသောအခါ, ကပါပဲ 1kb သည် 13kb ဖြစ်သည်! ပုံ ၉ ပုံအတွက်အသွားအပြန်အသနားခံခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုအချိန်သည်ယခုကုန်သွားပြီဖြစ်ပြီးအချက်အလက်ပမာဏကို ၃၀% ကျော်လျှော့ချနိုင်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ the ည့်သည်အရေအတွက်အားဖြင့်မြှောက်။ သင်အရင်းအမြစ်အချို့ကိုအမှန်တကယ်ဖယ်ရှားပစ်တော့မည်။
အဆိုပါ Apple navigation bar ဟာဥပမာကောင်းတစ်ခုပါ။ ခလုတ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ဖော်ပြချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ စာမျက်နှာပေါ်မှဖြစ်စေ၊ CSS သည်ခလုတ်၏ကိုသြဒီနိတ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးအသုံးပြုသူဘရောက်ဇာအားမှန်ကန်သောအခြေအနေကိုဖော်ပြသည်။ ဤပြည်နယ်အားလုံးသည်ဂရပ်ဖစ်တစ်ခုတည်းတွင်အတူတကွပြိုကျသော်လည်းစတိုင်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဒေသတစ်ခုချင်းစီကိုပြသထားသည်။
သင်၏ developer များသည် tools များကိုနှစ်သက်ပါက၎င်းအပါအ ၀ င်၎င်းတို့ကိုကူညီနိုင်သောတန်ချိန်များစွာရှိသည် Compass CSS မူဘောင်, တောင်းပန်ပါတယ် ASP.NET အတွက် CSS-Spriter Ruby အတွက်, CSSSprite ဇာတ်ညွှန်း Photoshop အတွက်, ရေတံခွန်, SpriteRight, SpriteCow, ZeroSprites, Project Fondue ၏ CSS Sprite Generator, Sprite မာစတာဝဘ်, ပြီးနောက် ရေတံခွန် က။
၏ screenshot Sprite မာစတာဝဘ်:
Martech Zone နောက်ခံပုံကို၎င်း၏အဓိကအကြောင်းအရာတစ်လျှောက်လုံးအသုံးမပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းကိုယခုအချိန်တွင်အသုံးချစရာမလိုပါ။
Tags: ကက်စကိတ်စတိုင်စာရွက်များcsscss Spritecss sprites များစာမျက်နှာမြန်နှုန်းခွေစတိုင်စာရွက်များ
အွန်လိုင်း Test Essentials
စက်တင်ဘာ 13, 2012 မှာ 5: 06 AM
စောင့်ပါ … စုစည်းမှုတစ်ခုလုံးသည် “ရုပ်ပုံ” (သို့မဟုတ် “လေယာဉ်”) မဟုတ်ပါဘဲ၊ ပုံတစ်ပုံချင်းစီ (သို့မဟုတ် ကာတွန်းပုံများ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စွာပြောင်းလဲနေသည့်ပုံများတွင် ပုံအုပ်စုခွဲများ) သည် “စပရိုက်” ဖြစ်ပါသလား။
ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို ကျွန်တော်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကတည်းက ပစ္စည်းတွေကို နာမည်ပြောင်းထားပေမယ့် Sprite က ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ ဒေတာဇယားမဟုတ်ဘဲ ကြီးမားတဲ့ data table မဟုတ်ဘဲ ပြသသွားတဲ့ Sprite ဖြစ်တယ်လို့ ကျိန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
("Sprite table"... ဒါ မဟုတ်ဘူးလား?)
13:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 09 မှာ
Mark ဟာ မတူညီတဲ့အချက်နှစ်ခုကို ပြောနေနိုင်ပါတယ်။ CSS ဖြင့်၊ သင်သည် သြဒီနိတ်များကို အသုံးပြု၍ ပြသရန် ပုံဖိုင်တစ်ခု၏ မည်သည့် 'အပိုင်း' ကို အခြေခံအားဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ရုပ်ပုံအားလုံးကို 'sprite' တစ်ခုတည်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး သင် CSS ဖြင့် ပြသလိုသည့်နေရာကို ညွှန်ပြနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။